I-R & D-Chengdu Cast Acrylic Panel Ishishini Co., Ltd.
Itekhnoloji yeR & D iziko lisebe apho inkampani yethu ityale imali kakhulu kwaye ifumana olona qeqesho njengesiqhelo, kwaye ijolise ekwakheni kwinqanaba eliphezulu kunye nobuchwepheshe obuphezulu be-R & D, ithatha inxaxheba kwisicwangciso sophuhliso lwenkampani, iimveliso ezintsha kunye nezigqibo zetekhnoloji entsha.
Phantsi kwesigunyaziso segosa eliyintloko lenkampani yethu, eli ziko linoxanduva lokumilisela nokuphumeza isicwangciso-qhinga se-R & D yenkampani kunye nesicwangciso sonyaka se-R & D, sibeka isiseko esihle semveliso yexesha elizayo enkulu; kwangaxeshanye, ikwasebenza ngenkxaso yezobuchwephesha kunye nomsebenzi wokubonisana wesicwangciso senkampani sophuhliso lobuchwephesha, uphuhliso lwemveliso entsha, utshintsho kwimveliso yakudala, ulawulo lobuchwephesha, njl.
Umlawuli welabhoratri yeziko le-R & D nguDeng Pan, enesidanga sokuqala sekhemistri eyunivesithi eyaziwayo e-China. Ukusukela ukujoyina inkampani ngo-2010, ngokweemfuno zophuhliso lwenkampani, iphanda iimfuno ezinokubakho zentengiso kunye nabaxumi, uye wakhokela iqela leziko le-R & D ukuba liphuhlise ngempumelelo ngaphezulu kweshumi leendidi zamashiti asebenzayo e-acrylic, isombulule Imveliso iingxaki zobuchwephesha, kwaye sisebenzisana nesebe lemveliso ukuphucula kakhulu izinga lemfundo kunye nokunciphisa kakhulu iindleko zemveliso. Phantsi kobunkokheli bakhe, i-R & D iziko linokukhawuleza lenze ingxelo yokunokwenzeka kwaye linikezele ngokukhawuleza izisombululo kubathengi abaneemfuno ezizodwa, liphucula kakhulu amandla ethu okwenza ii-odolo ezizodwa.
Ukusetyenziswa kwamashiti e-acrylic kwimarike kuyatshintsha ngokukhawuleza, ezinye izicelo ziyanyamalala, kwaye ezinye izicelo ezintsha ziyaphuhliswa. Isakhono esitsha kunye neqela le-R & D kubalulekile kwinkqubela phambili yenkampani. Ukugcina ivumba elibukhali kunye nokunyathela ngokusondeleyo kwiimfuno zentengiso, iqela lethu lobuchwephesha kwi-R & D likhula ngokuzinzileyo nangokuqhubekekayo, kwaye abasebenzi abakrelekrele ngakumbi bazakwaziswa kwiqela elizayo. Eyona njongo iphambili yeziko lethu le-R & D isasebenza ngamaashiti e-acrylic, anceda ukuphonononga usetyenziso ngakumbi kumacandelo amaninzi, ngokungathi akukho glare ye-acrylic sheet, anti-flame acrylic sheet, uhlobo olutsha lwemitya imitya ye-acrylic, njl.